voambolanasosokevitra [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/1/14ee485a7f321728f4e21a923bd2d4f0.xhtml failed
Tsy voatery ho voambolana marina ny eto. Fa soso-kevitra hanampiana ny voambolana informatika fotsiny. Efa ampiasaina ato anatin’ny wiki ny sasany, na any amin’ny forum na mety ho hitanao any ho any amin’ny tsy ampoizinao any.
Reni-karatra: hilazana ny carte mere na motherboard na mainboard. Hazavaiko kely:
ny “reni-” dia milaza hevitra roa: - lehibe indrindra (amina refy fizika) - ipoirana na iankinan’ny hafa rehetra. Hitantsika miverina ohatra io amin’ny hoe “renivohitra”, “renihevitra”, ... na ny hoe “renirano” aza. Efa fampiasa koa aza ny hoe “renipejy” hilazana “page d’accueil“
ny “karatra” dia hilazana an’ilay endriny mitapelaka. Fandikana ara-panononana ohatra ny karatra fantatsika rehetra ihany.
Mandrakitra, Raketina, Raketo, ... : hilazana hoe save na enregistrer. Mampiasa fotsiny ny hoe Rakitra (file na fichier) ho fototeny. Ara-panononana koa tsy dia mifanalavitra amin’ny hoe mandraikitra :)
Sarikapila: hilazana disk image. Mahalaza azy loatra ilay teny anglisy . Mety ho io hevitra io ihany no hita amin’ny hoe: saribakoly, na koa saritsiky (smileys) araka ny andikan’i hery azy.
Sandrify: Asa raha mety io handikana ny folder. Na tsy mi-fold aza no itahirizany rakitra fa mifanarona, tsaratsara kokoa ny securite am’zay :). Fa ny handikana directory na repertoire tsy hitako.
Asa raha efa nandalo tao amin’ny akademia ny hoe kapila mafonja talohan’ny nandraisana ilay hoe kapila manjelatra.
Mitsonga: Select, ary ny selected mety ho voatsonga na notsongaina
Kitendry: asa raha mahadika ny keyboard io. Noeritreretiko koa ny hoe rarimbokotra fa toa ratsy feo izany.
karatra fototra: io indray no ilazako ny hoe carte mere. Tahaka ny foto-kazo no ilazako azy.
tava miofo sy tava vao mitranga: ireo indray no ilazako ny fenetre pop-under sy fenetre pop-up. Hevitra ny ahy aloha.
voambolanasosokevitra.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43